Thyssen Museum dia manolotra fampianarana hafa maimaimpoana: Edward Hopper | Famoronana an-tserasera
Miverina amin'ny làlana hafa maimaim-poana amin'ny Internet isika Thyssen Museum ary amin'ity indray mitoraka ity dia milalao miaraka amin'i Edward Hopper izy: «Sinema sy fiainana moderina». Iray amin'ireo solontena ambony indrindra amin'ny realista an'ny s. XX ary izany dia napetraka ho filamatra amin'izao andro izao izay nanerena antsika hody.
Ao amin'ny tranga iray mitovy amin'ny mpanao hosodoko malaza be isika, ary i Edward Hopper io nandritra ny androm-piainany dia tsy dia nahasarika olona loatra izy toy ny tsikera. Manontany tena fa lasa mpaka sary hosodoko malaza ankehitriny izy noho ny sanganasany maneho ny fiainana maoderina sy ny fiaraha-monina.
Ny fiantsoana an'ity fampianarana ity hoe Sinema sy Fiainana Maoderina dia noho ilay izy miresaka momba ny mpanakanto manana toetra «mitantara» izahay izay akaiky kokoa ny fiteny sinematografia noho ny amin'ny teny voasoratra.
Ny hosodoko ho antsika nafindra tany Amerika tamin'ny taona 30 sy 40. Ary raha izy mihitsy no nirehitra fatratra tamin'ny sinema, dia zavatra mitovy amin'izany no nanjo ireo mpanatontosa sarimihetsika maro izay nandray azy ho loharanom-aingam-panahy ho an'ny sarimihetsika. Raha ny marina, amin'ity taranja ity dia hianaranao ny fitiavan'ilay mpanakanto ny sinema sy ny fitaomana nananan'ny sanganasany tamin'ny mpamokatra sarimihetsika sy talen'ny sary sy jiro.
Zanaka Konferansa video na lahateny 13 ary tsara vintana ianao afaka mahita amin'ny baiko tadiavinao. Hahafantatra mpanakanto iray ianao izay tsy maintsy niasa tamin'ny fanaovana sary an-tsary mba ho tafavoaka velona ary lasa loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny mpanakanto tamin'ny taonjato lasa toa an'ity.
Araka ny nolazain'i Jean Luc Goddard, Marina ny sary, ary ny sinema dia marina in-24 isan-tsegondra. Avelanay ianao miaraka amin'ny taranja Hopper mba hahafahanao mankafy azy io. Ary teny an-dalana izany taranja iray hafa avy amin'ny tranombakoka iray ihany.
rohy - Thyssen Museum - Edward Hopper
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fianarana an-tserasera maimaimpoana vaovao ao amin'ny Thyssen Museum: Edward Hopper, sinema ary fiainana moderina